» जिल्ला प्रहरी हिरासतमा को को छन् ‘विप्लव कार्यकर्ता’ ?
जिल्ला प्रहरी हिरासतमा को को छन् ‘विप्लव कार्यकर्ता’ ?
२०७६ बैशाख १,आईतवार १७:१८
मकवानपुर, वैशाख ०१ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपामा क्रियाशील भएको आधारमा ६ जनालाई हिरासतमा राखेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा जिल्ला इन्चार्जदेखि सामान्य शुभचिन्तकहरु पनि छन् ।
विप्लवको पार्टीमा आवद्ध भएकोमा प्रहरीले हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ सिमलटारबाट राजकुमार कुँवरलाई चैत ८ गते घरैबाट पक्राउ गर्यो । म्याजिक चलाउने र घरमा खोलिएको सानो पसल चलाएर गुजारा गर्दै आएका ५२ वर्षका कुँवर कुनै लगत क्रियाकलापमा आवद्ध नभएको छिमेकीहरु बताउँछन् । पारिवारिक स्रोतका अनुसार, उनलाई राति ८ बजे प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । एसपी साहेबले बोलाउनु भएको छ, हिड्नुहोस् फेरी घरमै ल्याएर छोडिदिन्छौँ भनेर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी लगेको थियो । उनीले कुनै गलत क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको भन्दै प्रहरीलाई गरीखान दिन आग्रह गरेका भएपनि सुनुवाई नभएको वताएका छन् ।
त्यसैगरी प्रहरीले राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नं. ९ अठारेका एक जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । प्रहरीले विप्लवको पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनको कोषाध्यक्ष भन्दै किरण अर्याललाई पक्राउ गरेको हो । सूर्य अर्यालका छोरा किरण २१ वर्षका छन् । उनी रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने तयारीमा भाषा पढिरहेका थिए । पक्राउपछि उनले विदेश जाने गरी अध्ययन गर्न पाएका छैनन् ।
राक्सिराङ, ७ का दिराम प्रजालाई हेटौंडा ९ बाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई पनि हिरासतमा राखिएको छ । स्रोतका अनुसार उनी विप्लव नेतृत्वको नेकपामा आवद्ध छैनन् । प्रतिवन्ध लाग्नु अघि कार्यक्रमहरुमा सामान्य रुपमा सहभागी हुने गरेका थिए, स्रोतले भन्यो ।
मनहरीबाट प्रहरीले सोनाम बललाई पक्राउ गर्यो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ बाट बीरबहादुर मोक्तानलाई पनि प्रहरीले विप्लव नेतृत्वको नेकपा जिल्ला इन्चार्ज बीरबहादुर घलान ज्वालासँगै पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउपछि उनीहरुलाई हिरासतमा राखी कानूनी कारवाही भइरहेको मकवानपुर एसपी मुकेशकुमार सिंहले जानकारी दिएका छन् । पक्राउ परेका मध्ये अर्याललाई चन्दा अशुलीमा, दीराम र कुँवर र सोनामलाई सार्वजनिक तथा ज्वाला र मोक्तानलाई बिस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्धामा अनुसन्धान तहकीकात भइरहेको एसपी सिंहले बताए ।
सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई ‘म विप्लव पार्टीको इन्चार्ज हुँ भनेपछि
विप्लबका मकवानपुर इन्चार्ज ज्वाला पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरीको पुष्टि
नेकपा इन्चार्ज ज्वाला पक्राउ
अपडेट : नेकपा मकवानपुर इन्चार्ज ज्वालालाई अदालत लगिँदै
नेकपा मकवानपुर इन्चार्ज ज्वाला अदालतमा, सोमबार बयान
भोलि शैक्षिक हड्ताल : ज्वाला
ज्वाला र सोम पक्राउको विरोधमा नेकपाको चेतावनी
८१ किलो गाँजासहित मकवानपुरबाट साह पक्राउ
लागूऔषध गाँजासहित हेटौँडाबाट ४ जना पक्राउ
अवैध रुपमा गिट्टी–बालुवा उत्खनन गर्ने एक्साभेटर चालक मकवानपुरका श्रेष्ठ प्रहरीको नियन्त्रणमा